Computer ma kabaha doonaa-6 Waxyaabaha aad Sameyn Karto
> Resource > Utility > 5 Waxyaabaha aad Sameyn Karto Marka aad computer ma kabaha doonaa
Waa arrin aad looga baqo inuu ku soo bilowdo maanta oo kale, inaad timaado xafiiska aroor hore, fadhiisan heli sancada deg-deg ah. Cabatay! The computer ma kabaha doonaa oo dhan. Waxaa reboot, oo weli failure. Inta badan dadka isticmaala computer ayaa laga yaabaa in noqnoqotay arrintani. Is deji!
Wixii Computer ma kabaha doonaa la Issue Hardware:
Haddii ay jirto wax calaamad iftiinka on your computer marka aad isku daydo in ay kabaha, waxaa laga yaabaa in dhibaato dhibaato xoog ama hardware PC, waxaad u baahan tahay in aad iska baarto naftaada ama aan ka helo qaar ka mid ah aqoonyahanada inaan ku saxno.
Fiiro Gaar ah: Waxa jira sabab kale oo arrintan: failure card Graphic. Marka kaarka Graphic waxaa ku fashilmay, aad computer la socda karaa laakiin ma kabaha doono oo dhan.
U dayactir Computer ma kabaha doonaa la Windows A Downlaods disk / CD
Haddii computer la ordaya oo kaliya aadan kabaha karo, waxaad hagaajin karo computer tani ma kabaha doonaa arrinta si fudud Windows ah Downlaods disk / cd. Si loo xaliyo dhibaatadan waa wax fudud. Waxaa jira 5 waxyaabo aad sameyn karto si ay dib u badbaadin Windows aad.
# 1. Ma soo kabashada file boot ah
Marka aad computer ku bilaaban, waxaa had iyo jeer bidbidayaan la shaashad madow. Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah faylka soo socda kabaha laga badiyay. Waxaad samayn karto soo kabashada file boot ah si caadi ah dib u iyaga u hesho.
* NTLDR maqan yahay ama ku kharribeen
* Ntdetect.com ka maqan
* Ntoskrnl.exe ka maqan
* NTFS.SYS ka maqan
* BOOTMGR maqan yahay ama ku kharribeen
* Hal.dll maqan yahay
# 2. Ma soo kabashada MBR ah
MBR, magac la soo gaabiyay ee Master Boot taariikhqorihii, caasimadii qaybta hore ee disk adag. MBR ma meeleeyo xijaab, laakiin ku yaalaa meel record boot ugu weyn ee ku hor (iyadoo tiro hoose LBA qaybta ka badan) Risaalo ka hore. Arrimaha MBR idiinka keeno boot disk dhicitaanka adag. Marka happena, waxaad arki doontaa "miiska baadil xijaab", "boot disk adag failure", iwm on your computer.
# 3. Ma soo kabashada qaybta boot ah
Qaybta boot xijaab waa qayb yar oo ka mid ah xijaab adag disk in ka kooban yahay macluumaad ku saabsan habka nidaamka qalliinka ee file (NTFS ama FAT32), iyo sidoo kale barnaamij luqad aad u yar mashiinka in ay muhim u tahay caawinta nidaamka qalliinka sida ay ugu rarataan culaysyo. Haddii aad ka shakisan tahay in Windows XP ma kabaha doonaa, maxaa yeelay, qaybta boot Risaalo ayaa waxaa fasaadi, waxaad isku dayi kartaa inaan ku saxno.
# 4. Ma soo kabashada diiwaanka a
Registry waa database yar in uu kaydiyaa goobaha qaabeynta iyo fursadaha in Windows. Waxaa ku jira goobaha loogu talagalay heerka hoose nidaamka qalliinka qayb sidoo kale codsiyada socda madal: wadayaasha qalab, yaruna, adeegyada, user interface, SAM, iyo codsiga xisbiga saddexaad oo dhan isticmaalaan diiwaanka. Haddii Registry kharribmay, waxay keeni karaan Windows ma booting kor . Waxaad la kulmi kartaa screen buluug, screen maran, Baadi codsiga booting, Baadi reserved diiwaanka, iwm Dhammaan dhibaatooyinkan waxaa sababi kara Registry abnormity.
# 5. Ha celin Windows ah
Dhibaatada of Windows failure booting waxaa keeni kara sababo kala duwan, sida ku kharribeen ama maqan Windows file nidaamka; kharribeen DPT (Shaxda Barzakh Disk); waxyeelo MBR, iyo kharribeen diiwaanka. Haddii aad u taageeray aad Windows / MBR / DPT / Registry ka hor, waxaad si fudud u soo celin kartaa adigoo gujinaya badhanka hoose markii ay burburtay.
No arrinta sababta your computer ma kabaha kartaa, waxa ugu horeeya ee aad samaynaysaa waa si aad u hesho a Windows disk Downlaods ama CD si aad u hesho bilaabo computer aad. Kombiyuutarka Kaliya waxaa bilowday, waxaad dhibta karaan qaladaad kale ama dhibaato on nidaamka. Hel ah Downlaods CD LiveBoot / USB , taas oo ka kooban faylasha xawaaladaha oo loo isticmaali karo in ay kabaha aad Windows.
Maskaxda ku hay marka aad la kulantid dhibaato ah "Windows ma bilaabi doonto". Waxay kaa caawin kartaa si degdeg ah oo sax ah oo aad ku saxno. Dhammaan xal u Windows arrimaha booting ku jira tan CD LiveBoot khaanada Downlaods , iyo sidoo kale dib u soo kabashada xogta, tababaraha disk iyo finder password.
Hadda, raac tallaabooyinka hoose si aad your computer.
Ku rakib oo ay maamulaan barnaamijka kombiyuutarka ah shaqaynayn si caadi ah. Geli maran CD ama USB drive ah, oo aad ku gubi karaa Downlaods CD ama USB drive la mid click.
Xaga waxaa si aad u computer CD-ROM iyo computerka aad. Markaas ay doortaan in ay kabaha your computer ka LiveBoot. Oo hadda waxaad eegi kartaa in lagu dhiso Windows 7 boot , ama samayn ah dayactirka xawaaladaha Windows XP . Wax kasta, taas CD Downlaods waa la jaan qaada Windows oo dhan.
Iyo in ka badan, ka dib markii loading habka, aad samayn karto shuqul kasta oo ah kuwan soo socda la this LiveBoot, taas oo aad bixisaa taxane ah oo biilasha dayactir Windows.
Sidee inuu ka soo kabsado illoobi Hotmail Password in Windows 8/7 / Vista / XP
Sida loo abuuro Downlaods LiveBoot CD